Hevitra vitsivitsy hitandremana amin'ny fanaovana trano fampiroboroboana-Faucets an-dakozia, Faucets famenoana pot, Faucets fandroana | WOWOW
Home / Interior design / Hevitra vitsivitsy hotandremana amin'ny fanaovana fampiroboroboana ny trano
Hevitra vitsivitsy hotandremana amin'ny fanaovana fampiroboroboana ny trano
2020 / 09 / 28 FisokajianaInterior design 4809 0
Mikasa ny hanao fanatsarana ny tranonao manokana ve ianao nefa matahotra noho ny vidin'ny vidiny? Aza matahotra! Afaka manova ny tranonao ianao raha tsy mampiasa vola be. Ny antony mahatonga ny fanatsarana kely isaky ny efitrano ary na dia ao anatin'ny ivelany aza ny ampahany amin'ny trano dia afaka manome fahasamihafana tsara ao. Ankoatr'izay, azonao atao ny mandray ny familiana PrimeReviews amin'ny hatsaran'ny tranonao.
Na izany aza, eto ambany dia misy sosokevitra voalohany mety hanamora ny fanaovana fanatsarana ao an-tranonao.
Tehirizo tsara sy mora izy io
Hanombohana azy, ny fahadiovana no olana lehibe mahatonga ny fisehoan'ny trano rehetra mahaliana sy mahasarika ny sain'ny olona. Azonao atao ny manomboka manadio ny tranonao avy amin'ny tapany ivelany ary tsy maintsy mieritreritra ny fanadiovana ireo sombin-javatra aloha ianao. Aorian'izany dia azonao atao ny mamindra mialoha ny fahadiovan'ny tokotaninao.
Miezaha hazava ny tokotaninao sy manampy zava-maniry vaovao amin'ny fanapahan-kevitrao. Aorian'izany dia azonao atao ny mandoko ny varavarana fidirana ao an-tranonao satria tokony hanome endrika mahafinaritra sy mahaliana ny tranonao manokana.
Ho fanampin'izany rehetra izany, miezaha hihazona ny tranonao ho mora sy milamina ary aza mandehandeha loatra. Ireo olana kely ireo dia hanova ny fomba fijerin'ny tranonao manokana.
Aza odian-tsy hita ireo teboka roa lehibe ao amin'ny fonenanao
Ny toerana 2 fampiasa indrindra amin'ny trano dia ny efitrano fandraisam-bahiny sy lakozia. Noho izany, raha te hanana vola amin'ny famatsiam-bola ao anaty trano enchancment ianao dia tsy maintsy mampiditra olana vaovao nefa lamaody ao amin'ireto toerana mafana roa ireto. Hahatonga azy ireo hanampy bebe kokoa ary ho fanatsarana ny vidin'ny tranonao manokana.
Manaova famatsiam-bola araka ny tokony ho izy
Raha hitanao fa misy fanavaozana, fanalefahana ary fanadiovana ary ankehitriny dia mila mandany vola amin'ny fanavaozana ny trano ianao, ny fanavaozana dia tsy maintsy zaraina ho singa 4 izay mety hahatonga ny tranonao manokana hahavariana sy maniry fatratra.
Lighting: Satria misy fiatraikany lehibe amin'ny jiro ao an-trano ny jiro ary raha tsy faly amin'ny helatry ny tranonao ianao, dia azonao atao ny manolo azy fotsiny. Tokony hividy LEDs nohavaozina ianao izay mety hahatonga ny endrik'ireo efitrano tsirairay ho tena mahavariana sy manintona.
fantson-drano: Ankehitriny, azonao atao ny mamindra mialoha mankany amin'ny dingana fantson-drano satria anisan'ireo trano manana fantsona teo aloha izay miafara amin'ny famoahana. Noho io zava-misy io dia tsy maintsy manatsara ny fantson-drano na ny fantson-drano any an-tranonao ianao satria tsy tokony hanatsara ny vidin'ny tranonao manokana izany.
Flooring: Ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia gaga amin'ny gorodona hazo na karazana gorodona hafa mifandraika amin'izany. Noho izany, ny antony maha mora ireo gorodona ireo dia toy ny raha ampitahaina amin'ny carpeting. Ankoatr'izay, ny gorodona vita amin'ny taila dia azo ekena ary tsara endrika any an-trano.
Mpisolo toerana HVAC: Miaraka amin'ny fivoaran'ny fahalalana, misy programa HVAC vaovao natomboka hita eny an-tsena izay mety handany anao ny vidiny indray mandeha. Na izany aza, mety hamonjy herinaratra goavambe izy ireo ary mety ho voatahiry koa ny fandoavanao vola. Izy io dia hampiakatra ny vidin'ny tranonao manokana ary ny famatsiam-bolanao any an-trano dia tsy ho very maina.
Noho izany, ireo olana vitsivitsy ireo dia afaka manampy anao hanisy enchancment mahafinaritra any an-tranonao. Ireo fomba enchancment an-trano ireo dia hahatonga ny tranonao manokana ho tsara tarehy ary ho fanatsarana ny vidiny.
Previous :: Ny faucet amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mahomby indrindra: paompy hanatsarana ny karazana efitrano fandraisam-bahininao Next: 'Vonjeo! Nopotehiko ny hadisoan'ny DIY ao an-tranoko mba tsy hanandrana mihitsy ao an-trano
Zon'ny mpamorona © 2020-2025 WOWOW FAUCET LLC. Zo rehetra voatokana.